Iingcebiso ezi-5 zokuHlela iVidiyo kubarhwebi | Martech Zone
NgeCawa, ngoFebruwari 9, 2020 NgeCawa, ngoFebruwari 9, 2020 UHalley Johnson
Ukuthengisa ividiyo iyeyona ndlela iphambili yokuthengisa kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ngamaxabiso ezixhobo kunye neenkqubo zokuhlela ezincipha njengoko zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo, ikwafumaneke ngexabiso eliphantsi kakhulu. Imveliso yevidiyo unokuba nenkohliso yokulungisa amaxesha ambalwa okuqala xa uzama.
Ukufumana indlela elungileyo yokuseta ividiyo ukulungiselela ukuthengisa kunzima kunokuba kuhlelwe ngokwesiqhelo. Kuya kufuneka ubeke imveliso yakho kokona kukhanya kunokwenzeka ngelixa usenza nevidiyo entle. Into ephambili oyifunayo ukuhlela ividiyo kakuhle ngamava. Okukhona usenza rhoqo kokukhona uya kufumana ngcono.
Kuhlala kukho izixhobo ezimbalwa kunye namacebo okukwenza ube ngumhleli wevidiyo ongcono ngokukhawuleza. Olu luluhlu lweengcebiso ezimbalwa kunye namaqhinga okwenza ukuba ube ngumthengisi ongcono kwaye wenze iividiyo zakho zibonakale ngcono kwangoko.
Ingcebiso 1: Qalisa ukurhabaxa
Akukho sizathu sokusebenza kwimiba yexesha okanye ukujongwa kwevidiyo ngaphambi kokuba usike ukusika okungalunganga. Ukufumana ukusika kunye kufuna nje ukubeka zonke ezona kliphu zakho zilandelelanayo ngokolandelelwano lwamaxesha ukuze ube nombono ombi kakhulu weziphi iziqwengana ozisebenzisayo kunye nalapho kufuneka zibekhona. Oko kuyakwenza ukuhlela kube lula kakhulu kwaye kukuxelele ukuba zeziphi iziqeshana ozifunayo.
Eli candelo alizukujongeka lilihle. Niza kuba neevidiyo ezingacwangciswanga ngokulandelelana kwaye akukho namnye kubo oza kusebenza kunye okwangoku. Sukuba nexhala okwangoku kuba le yinxalenye yevidiyo yakho engekaqali ukubonakala.
Ukuthatha iiklip zakho kunye nokuzifumana ngokulandelelana yeyona ndawo ifanelekileyo onokuqala kuyo. Akukho sidingo sokuqala ukugxeka umsebenzi wakho okanye ukhathazeke okwangoku. Ayifanelanga ukuba ijongeke kakuhle kodwa kufanelekile ukuba ilungelelaniswe.
Ingcebiso 2: SukuNgaphezulu kokuHlela
Ngaphandle kokuba uhlekise nge-movie yesenzo akukho sizathu sokongeza kakhulu kwividiyo yakho ngexesha lokuhlela. Ngokukodwa ukuba usaqala kungabonakala ngathi kumnandi kakhulu ukusebenzisa zonke iziphumo ezizodwa kunye nengxolo enikezelwa yinkqubo yakho yokuhlela. Sukwenza oko, ayizukubonakala intle okanye ingcali.
Gcina iinguqu zakho zilula kwaye zendalo. Awufuni ukuba nevidiyo ephazamisayo kule nto uzama ukuyithengisa okanye ejongeka ngathi igcwele kakhulu. Vumela ividiyo yakho ukuba izithethele ngaphandle kwesoftware yakho yokuhlela.
Ukuhlela kwakho kufuneka kuhambelane nethoni yevidiyo ngaphandle kokutshintsha umyalezo ngokubanzi. Isoftware yokuhlela kumnandi ukudlala nayo kwaye kulula ukuyithatha. Kungcono ukuhlahlela kwaye wenze ukongeza kunokuba uyikhuphe kwaye kufuneka usike itoni yeziphumo.
Ingcebiso 3: Sebenzisa iSoftware elungileyo
Kukho amakhulu iinkqubo zokuhlela ividiyo ungathenga okanye ufumane simahla. Qiniseka ukuba wenza uphando ngaphambi kokuba uzibophelele kwinkqubo yokuhlela. Umahluko phakathi kwevidiyo enkulu kunye nokubi unokuhla kwisoftware oyisebenzisayo.
Rhoqo kuya kufuneka uhlawule isoftware yokuhlela engcono. Sukothuswa ngamaxabiso angabizi kakhulu kwaye phantse lonke lixabisa imali eyongezelelweyo. Jonga uphononongo kwaye bathini abahleli abaziingcali malunga nesoftware ngaphambi kokuba uthenge ukuze wazi ukuba ungayithemba.
Nje ukuba ukhethe isoftware yakho yokuhlela kuya kufuneka ufunde ukuba uyisebenzisa kanjani na nangokunokwenzeka. Bukela iividiyo zeYouTube ezonakalisa indlela yonke into esebenza ngayo kwaye ufunde uninzi lwamaphepha anokuchaza izakhono ezithile kuwe. Kungcono ukuba isoftware yakho ibe ngcono xa iividiyo zakho ziya kuvela.
Ingcebiso 4: Nika ingqalelo uMculo
Uya kufumana iindawo ezininzi ezahlukeneyo oza kuzifumana umhlwalumculo ongenasimahla kwi-intanethi ngaphezulu kwexesha lakho njengomhleli. Qiniseka ukuba uyawusebenzisa lo mculo ngononophelo kwaye uyonga. Umculo omninzi ngexesha elingalunganga unokuyonakalisa ngokupheleleyo ividiyo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa ukhetha umculo kukuqinisekisa ukuba isimahla ukuyisebenzisa okanye unemali oyibekele ukuhlawula umculo. Emva koko kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lomculo oluya kuhamba kakuhle kwividiyo yakho yentengiso. Umculo othambileyo okanye umculo okhawulezayo unokutshintsha ngokupheleleyo ividiyo ukuze uqiniseke ukuba ukhetha ngokuchanekileyo kwaye mhlawumbi ungazama umculo okhethiweyo ohlukeneyo.
Okokugqibela, kuya kufuneka uqiniseke ukuba umculo uyayongeza into kwividiyo yakho. Ukuba umculo yinto eyongezelelekileyo engenzi mahluko kwividiyo kunokuba kunokuba ngcono ukushiya umculo ngaphandle. Umculo unokutshintsha ividiyo kodwa ayisoloko ifuneka.
Ingcebiso 5: Awunakho ukulungisa yonke into
Isoftware yokuhlela ividiyo iyamangalisa kwaye inokulungisa izinto ezininzi kangangokuba unokuziva ngathi yonke into inokulungiswa kwimveliso yangemva. Ayiyonyani leyo kwaye ukuba awuyenzanga umboniso wevidiyo oyihlelayo unokuziva uxinzelelo ngakumbi ukwenza ukuba ifilimu ibonakale intle ukuze ungafumani tyala ngeempazamo. Inyaniso ikho ezinye izinto ezingenakho nokuzilungisa kakhulu ezinokuzilungisa.
Ungalungisa ukukhanya kunye nesandi kakhulu kwinkqubo yokuhlela kodwa usenokungakwazi ukuwenza ugqibelele. Akukho nto iphosakeleyo ngokungakwazi ukulungisa into eyayiphazanyisiwe kukufota. Ukuhlela kwakho kukhona ukulungisa izinto onokuzenza kwaye yonke into ibonakale ingcono, ingenzi imimangaliso.
Zinike ikhefu kwaye ukhumbule ukuba nabahleli abagqwesileyo abanakho ukulungisa ividiyo embi. Yenza konke okusemandleni akho kwaye uqiniseke ukuba uyazingca ngomsebenzi wakho. Awuyi kuba nakho ukulungisa yonke into kodwa uya kuyenza yonke into ibangcono kunangaphambili.
Ukuhlelwa kwevidiyo ngumsebenzi owufundayo njengoko usiya. Okukhona uhlela ngcono uza kufumana ukusebenzisa isoftware kunye nokuqonda ukuba yintoni onokuyenza. Njengoko ufunda uya kuba ngumhleli ongcono kwaye wonwabele umsebenzi wakho nangakumbi.
Abahleli abakhulu bayazi ukuba uyilo lwabo olurhabaxa luya kuba rhabaxa kwaye kulungile. Isoftware yeyona nto ibalulekileyo esetyenziswa ngumhleli ke qiniseka ukuba eyakho iphezulu-inotshi, kwaye uhlala uphantsi kohlelo phambi kohlelo lwakho olungaphezulu. Akukho nto ungenakuyenza ngcono ngokuhlela kodwa unokwenza izinto zibonakale ziphambene ukuba wenza okuninzi.
Okokugqibela, khumbula ukuba uyi umhleli, hayi umlingo. Kukho izinto ongeke ukwazi ukuzilungisa kwaye zilungile. Ezi ziingcebiso ezimbalwa zokukunceda ube ngumhleli ongcono wokuthengisa iividiyo.
tags: IiVidiyo zeNtengisoukusika irhabaxatipsukuhlela ividiyosoftware yevidiyo
UHalley Johnson ngumbhali ozimeleyo wesoftware kunye nomhleli. Ngubani oqeshwe ngoku Kwangoko.co.uk. Unamaqhekeza ambalwa apapashiweyo phantsi kwegama elimbumbulu. Zibandakanya imibongo engezantsi komndilili. UHalley okwangoku ukwinkqubo yokubhala inoveli yakhe yokuqala epheleleyo (iya kuba phantsi kwegama lakhe lokwenyani). Eyona nto ayifezekisileyo kukuba ngumama olungileyo kwihagu yakhe kunye nentombi ephakathi kubazali bakhe.
Okwangoku: Lawula ngokuBanzi ukuThobela iiSayithi zaKho kunye neeNkqubo